★ Iluncedo esixekweni ・ Ukujongwa kweevidiyo okungasikelwanga mda ・ Iintlobo ezininzi zezixhobo zokupheka ☺🍽 Elona gumbi linamandla apho unokuhlala khona ngokucotha kude kube yintsimbi ye-12:00 kusuku olulandelayo ★
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAyako
Eli gumbi libanzi le-35m2 lisembindini wedolophu yaseKumamoto, "Shimotori". Kuba inomabonakude wentonga yoMlilo, kucetyiswa ukuba izibini kunye nabahambi beshishini abafuna ukuchitha ixesha labo bebukele iividiyo abazithandayo. Ibhedi enye ephindwe kabini kunye nebhedi enye yesofa enye inokuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu aba-3.
Ungayibukela iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon kunye neYou Tube simahla kweli gumbi. Ukuba ubhalisele inkonzo yevidiyo efana neNETFLIX okanye iHulu, ungangena ngeakhawunti yakho ukuze uyibukele.
Ukongeza, zininzi izinto zokupheka, ezinjengee-toaster, ii-rice cookers, iimbiza zodongwe kunye nee-noodles, ngoko kutheni ungakonwabeli ukutya kwakho kwigumbi lakho? Iivenkile eziluncedo, i-Starbucks, iiMacs, iivenkile zeziyobisi, iivenkile ezinkulu, njl.njl. ziphakathi kohambo lwemizuzu emi-3, ke ilungile kuba isesixekweni.
Ikwaxhotyiswe ngomatshini wokuhlamba i-drum-type, i-vacuum cleaner, izinto zokupheka kunye ne-tableware, ngoko isetyenziswa ngabantu abaninzi nangexesha lokuhlala ixesha elide. Ukuhlala ixesha elide, isaphulelo seveki ye-1 (ubusuku obu-7 okanye ngaphezulu) yi-15% OFF, isaphulelo seveki ye-4 (ubusuku be-28 okanye ngaphezulu) yi-20% OFF, i-8 isaphulelo seveki (ubusuku be-56 okanye ngaphezulu) yi-25% OFF, i-12 iveki isaphulelo (84) 30% isaphulelo ziya isicelo ubusuku nangaphezulu.
Ifumaneka eShimo-tori kumbindi wedolophu yaseKumamoto, eli gumbi lokuhlala liyi-35 m2 ngobukhulu. Ine-Fire Stick TV, ngoko ke ilungile kwabo bafuna ukuyithatha lula kwaye babukele iividiyo abazithandayo. Ngentsimbi ye-12, akukhuthazwa kuphela kwizibini ezitshatileyo kodwa nakwabo bafuna ukuphumla ngokwabo.
Ukuba ubhalisa kwinkonzo yevidiyo efana ne-NETFLIX njl., ungangena ngeakhawunti yakho kwaye uyibukele.
Ukongeza, kukho izinto ezininzi zokupheka, ezifana ne-toaster, iimbiza zodongwe, i-TUFFY's flowing somen noodles kwaye, ukuze ukonwabele ukutya kwakho egumbini. Iyafaneleka kuba ikufutshane kakhulu kwiivenkile ezinkulu kunye neevenkile eziluncedo kuba ingaphakathi. isixeko.
Kukho oomatshini bokuhlamba bohlobo lwedrum, abacoci bevacuum, izixhobo zokupheka kunye netafile, abantu abaninzi bayisebenzisa nokuba bahlala ixesha elide.Ukuhlala ixesha elide, isaphulelo se-15% sisetyenziswa kwiveki enye (ubusuku obu-7 okanye ngaphezulu), i-20% isaphulelo kwiiveki ezi-4 (ubusuku be-28 okanye ngaphezulu), i-25% isaphulelo kwiiveki ze-8 (ubusuku be-56 okanye ngaphezulu) kunye ne-30% isaphulelo kwiiveki ze-12 (ubusuku be-84 okanye ngaphezulu).
40" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.87 ·Izimvo eziyi-105
Ukuhamba ngomzuzu-7 ukuya eSakuramachi Kumamoto (iSakuramachi Bus Terminal) kunye nokuhamba ngomzuzu-10 ukuya eKumamoto Castle Park naseKato Shrine. Iibhasi ezimgama ophakathi ukuya kwisikhululo seenqwelomoya iKumamoto, Aso, kunye nezinye iiprefectures nazo zihamba ukusuka kwiSakuramachi Bus Terminal, isenza isiseko esiluncedo kakhulu sokujonga indawo eKyushu kunye naseKumamoto. Ukongeza, kukho i-Seven-Eleven kunye ne-FamilyMart, i-Starbucks Coffee, i-McDonald's, iivenkile zeziyobisi, iivenkile ezinkulu, njl.njl. ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-3, ngoko ke ikulungele nokuba kusedolophini.
Ukuhamba ngemizuzu eyi-7 ukuya eSakuramachichikumamoto (iSakuramachi Bus Terminal), kunye nokuhamba ngomzuzu-10 ukuya eKumamoto Castle Park naseKato Shrine.
Iibhasi ezisingise kwisikhululo seenqwelomoya iKumamoto kunye neAso, kunye neebhasi ezimgama ophakathi ukuya kwezinye iiprefectures nazo ziphuma kwisikhululo sebhasi saseSakuramachi, nto leyo eyenza kube lula ukubona kwakho indawo eKyushu.
Kukwakho ne-7-Eleven kunye ne-Family Mart, i-Starbucks Coffee, i-McDonald's, izitolo zamachiza, kunye nevenkile enkulu phakathi kohambo lwemizuzu emi-3.
Iluncedo kakhulu kuba isedolophini.
Umbuki zindwendwe ngu- Ayako
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi.
Nceda uzive ukhululekile ukuba undithumelele umyalezo ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki!
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 熊本県熊本市保健所 | 指令（生衛）第129号
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chuo Ward, Kumamoto